Samsung Mutevedzeri weMutungamiri anowira mune yakaipa huori hutsotsi | IPhone nhau
Samsung VP inowira mukukuvadza kwakashata
Zvinotaridza kuti munguva pfupi yapfuura Samsung inodonha kubva mugomba rerima kuti iwire mune imwe. Runyerekupe rusinganzwisisike nezve kuvhurwa kweGalaxy S8 inotanga kumira mushure mekunge zvataurwa kuti kuferefetwa kwemabhatiri anoputika ari muGPS Note 7 kwapera. Uye zvakadaro, kunyangwe zvakadaro havagone kuzorora pamuzinda wekambani yeNorth Korea, uye ndezvekuti kana nguva pfupi yadarika takazviziva izvozvo Mutungamiri weSamsung akange achipomedzerwa kuve nechekuita nehuwori hukuru, zvinoita sekunge mutevedzeri wake President anga ari iye anotevera domino kudonha zvakasikwa Chii chiri kuitika kuSamsung mahofisi makuru?
Kuti iyo kambani yekuSouth Korea inokwanisa chero kutora chigaro pamusika chinhu chatakange tatoziva, mitambo yayo yakasviba maererano nekushambadzira, pamwe nekufamba uye kupomedzerwa kwekubiridzira mumusika kuri kukonzera mamiriro asingatendeke.
Zvisinei, zvingave zvounyengeri kubvisa kubva kuSamsoni nebasa rayo guru, zvigadzirwa zvinoshamisa seGalaxy S6 Edge uye nekushanduka kwayo, iyo S7. Kune rimwe divi, ivo vane kumashure kweakacherekedza trajectory mukuvandudzwa kweAMOLED mapaneru uye zvimwe zvakawanda zvishandiso izvo zviri vatungamiriri mumisika yavo, isu tinopokana kuti izvi huori zvinonyadzisa zvevashoma vasina moyo mukambani zvinozokanganisa zvakakwana kuti Samsung itambure, pa zvishoma pamwero mukuru.
Kune rimwe divi, zvinoita kuti tifungisise zvese zvaiitika munguva yakapfuura yeSamsung, kusvika pamhedziso yekuti kuve mumaoko evapomeri matsotsi, chero chinhu chingadai chakaitika mumahofisi iwayo. Lee Jae-Yong anga ari wekupedzisira kubatwa nechirongwa ichi chinotyisa, mushure chaipo Park Geun-Hye, Mutungamiri weSamsung (ndiregerere kana ndisina kunyora zvakanaka) akadonha. Aingova maawa makumi maviri nemaviri kubvira chirongwa chekutora matsotsi aya chatanga uye zvinotarisirwa kuti vachawira zvakanyanya zvine hukama nenyika yehunyanzvi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Samsung VP inowira mukukuvadza kwakashata
Data Widget yemahara kwenguva shoma
Tarisa Player, iyo purogiramu yekuteerera podcast needu Apple Watch